Rayaale: Waxaan u arkaa olole dacaayad - BBC Somali
Rayaale: Waxaan u arkaa olole dacaayad
5 Sebtembar 2012
Image caption Daahir Rayaale Kaahin waa Madaxweynihii hore ee Somaliland
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UDUB ahna Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa ku tilmaamay gef iyo dacaayad loola jeedo xisbiga UDUB go'aankii shalay ay gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada.
Gudiga ayaa waxa ay shalay go'aan ku gaareen inay laalaan xubnaha ay xisbiga UDUB u soo sharaxeen inay u tartamaan dooraashooyinka.
Daahir rayaale oo ka jawaabayay go'aankaasi ayaa wuxuu u waramay weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid cige wuxuuna ugu horreyn ka hadlay sababta uu ku diidanyahay go'aanka gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda.
Maqal Gabar Soomaali ah oo Mareykanka ku kaxeysa gaari xamuul ah
Gabar Soomaali ah oo Mareykanka ku kaxeysa gaari xamuul ah
Maqal Mareykanka oo hakiyay lacago uu siin jiray milatariga Masar
Mareykanka oo hakiyay lacago uu siin jiray milatariga Masar
Maqal Maktabad Muqdisho laga furay. Warbixin iyo Sawirro
Maktabad Muqdisho laga furay. Warbixin iyo Sawirro
Maqal Maxaa helay degmada Shingaani mar haddii ay dhisantay Muqdisho inteeda kale
Maxaa helay degmada Shingaani mar haddii ay dhisantay Muqdisho inteeda kale
Maqal Dhoofka xoolaha nool oo sare u qaaday dakhliga Somaliland
Dhoofka xoolaha nool oo sare u qaaday dakhliga Somaliland
Maqal Sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka Gaarisa la degay?
Sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka Gaarisa la degay?